Home » Tourism » WTTC na-agba mbọ ijikọ ụwa ụfọdụ maka mgbake njem
WTTC mere ya. Nzukọ mbu nke njem ụwa na njem nlegharị anya kemgbe ntiwapụ nke COVID-19. Cancun, Mexico bụ ebe mgbakọ na ndị sonyere si mba dị iche iche wee si Coronavirus kwusi na-esote njem maka njem.
E nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme, enwere ọtụtụ ikpe na-ezighi ezi na nsogbu. Offọdụ n'ime okwu ndị dị otú ahụ pụtara ìhè.
Miss tufuru Nzukọ WTTC na Cancun? Lelee ihe omume ahụ dum eTurboNews site n'isiokwu a dị na peeji nke 3.
Leadersfọdụ n'ime ndị na-ahụ maka ọha na eze na ndị na-ahụ maka njem njem na njem nlegharị anya na mba ụwa jikọtara ọnụ iji wee malitegharịa njem mba ụwa na mmechi nke World Travel & Tourism Council's (WTTC) Nzukọ Mba Nile.
Nzukọ Global Summit kpọrọ Carnival Corporation President na CEO, Arnold Donald, dị ka onye isi oche ọhụrụ nke WTTC, nke na-anọchite anya ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na mpaghara njem njem na njem njem nke onwe.
Ndị otu dị mkpa na nzukọ a mechara tụlee otu ha ga - esi bido ịmalite njem mba ụwa n'enweghị nsogbu ọ bụla, ebe ha na-ele anya na ọdịnihu ga-adigide ma jikọtara ọnụ.
Onye isi oche WTTC ọhụrụ weghaara onye isi oche, Chris Nassetta, Onye isi na onye isi oche nke Hilton, mgbe afọ atọ gara nke ọma na isi WTTC.
N'ịgbaso ihe ịga nke ọma nke ụbọchị 2 Cancun Global Summit, WTTC kwupụtara Manila, isi obodo Philippines, ga-abụ onye ọbịa nke nzukọ Global Global na-esote yana ụbọchị ekwenye.
Ndị isi azụmaahịa 600 +, ndị ozi gọọmentị, na ndị na-eme mkpebi dị mkpa sitere na mpaghara njem njem na njem njem ụwa niile gbakọtara na Mexico iji kwurịta ụzọ mgbake maka ngalaba ahụ metụtara.
O doro anya, òkè dị iche iche na mpaghara, na-eme na Summit nke ntụpọ ntụpọ. Achọghị ndị ndu si European Union na South Africa n'onwe ha, mana ndị isi ndị ọzọ dị ka Minista nke njem na Brazil; Roger Dow, onye isi ndi US Travel Travel; ma ọ bụ Isabell Hill, Director nke Office of Travel and Tourism, United States Department of Commerce, nke ndị na-aga na nzuzo na-aga.
Puerto Rico bụ ebe izizi mbụ maka nzukọ 2020 ahụ. A kwagara nzukọ 2020 na Cancun. Ihe kpatara ya bụ n'ihi ajọ ifufe. 2020 emeghị ruo ugbu a na 2021. Ya mere, WTTC mekwara afọ 30 na Cancun.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Puerto Rico enweghị akụkụ ma ọ bụ na a hụrụ ya na ogbako WTTC n'izu a.
Dabere na akụkọ mgbasa ozi The Puerto Rico Tourism Co. gbara akwụkwọ ikpe megide World Travel and Tourism Council (WTTC) na-achọ nkwụghachi nke $ 1.5 nde ọ kwụrụ dịka akụkụ nke nkwekọrịta - nke mebiri - iji kwado ihe omume ahụ, dị ka n'okwu ahụ gbara akwụkwọ na San Juan Superior Court.
Na Septemba 2019, onye na-akwado ihe omume mpaghara, Discover Puerto Rico, binyere aka na Memorandum of Understanding na WTTC dị na UK iji kwado nzukọ 2020 WTTC Global Summit na agwaetiti US na Eprel 2020. WTTC chọrọ $ 4 nde site na onye ọbịa iji weta ihe omume na Puerto Rico.
Agbanyeghị, na Jenụwarị 2020, WTTC kwupụtara na ọ gaghịzi na-eme ihe omume na Puerto Rico, na-ebugharị ya na Cancún, Mexico kama. Dika nkwuputa a bu nkwuputa nkwuputa nke WTTC nye ndi njem nleta na o gha eweghachi $ 1.5 nde zuru oke, ma oburu na ndi ochichi nakweere mmebi nke ihe omume, dika ikpe si kwuo.
Na-efu na Cancun bụ World Tourism Organisation (UNWTO). Mgbe Dr. Taleb Rifai bụ Secretary General nke UNWTO ma WTTC na UNWTO ka a na-ahụkarị ma na-ahazi ọrụ. Nke a kwụsịrị mgbe Georgia National Zurab Pololikashvili weghaara oche nke njikọ UN na 2018. Na-ekwusi ike otu UNWTO tufuru na mkpa na ụwa ụwa nke njem bụ eziokwu ahụ ọtụtụ ndị otu gọọmentị UNWTO na-eleba anya ugbu a na WTTC dị ka ndị mmekọ nwere ntụkwasị obi. Ọ na-akọwa nnukwu mmasị nke ndị ọrụ ọha na eze ga-abụ akụkụ nke WTTC trendsetting.
Agbanyeghị WTTC na-anọchite ụlọ ọrụ ndị njem kachasị ukwuu n'ụwa, n'ihi ọrịa na-efe efe ma ọ bụ onye otu-isi nke ebe ndị njem metụtara njem gụnyere Nepal, Asia, na Africa, Pacific enweghị ike ịbụ akụkụ nke mkparịta ụka a dị mkpa. Mịnịsta Ala Jamaica Edmund Bartlett nyere ọtụtụ n'ime ha olu. Juergen Steinmetz, Onye isi oche nke World Tourism Network (WTN) na-anọchite ọtụtụ ụlọ ọrụ dị obere na obere ụlọ ọrụ na mba 127, hụrụ ihe omume ahụ dịka onye na-abụghị onye otu.
Onye ama ama na onye anata otutu onyinye na onyinye bu Hon. Ahmed Al Khateeb, Mịnịsta nke njem maka Saudi Arabia. O zikwara isi okwu. Enyere Saudi Arabia ohere maka WTTC ịnweta ụlọ ọrụ mpaghara na Alaeze ya. Saudi Arabia rutekwara Mexico na Caribbean na itinye ego na ohere imekọ ihe ọnụ. Saudi Arabia bụkwa ebe obibi nke mpaghara UNWTO mpaghara ọhụrụ yana etiti yana Global Resimence Resilience na Crisis Management Center na-ezubekwa. Onye ozi ahụ kwuru na mgbe obodo ya kwupụtara visa ndị njem tupu ụwa eruo COVID-19, a tụrụ anya ka ngwa 40,000. Eziokwu ahụ bụ 400,000.
Ndị mmegide kpọmkwem na US, Canada, Europe, na Australia dọrọ aka ná ntị banyere oke mmebi iwu ụmụ mmadụ na Saudi Arabia. Otú ọ dị, eziokwu bụ na n'agbanyeghị nsogbu ndị a, ikike njem nleta maka Alaeze ahụ buru oke ibu.
Ọ bụ ọgwụ mgbochi nanị azịza ya. Gụ maka nke a na nsogbu ndị ọzọ ekwuru ma lelee mmemme ahụ na ntanetị. Pịa na peeji na-esote.
Otu n'ime ndị ozi zuru ụwa ọnụ nke njem nleta na onye mmeri maka mkpa nke njem ndị njem pere mpe, Hon. Edmund Bartlett si Jamaica nọ na mkpọpụ izuụka abụọ mgbe ọ laghachiri Jamaica. Ọ maara na ihe omume dị na Cancun dị mkpa iji weta nchegbu nke Caribbean na ebe ndị ọzọ dị obere iji merie mba ndị mepere emepe gụnyere US, Europe, na UK.
Ọgwụ mgbochi enweghị ike ịbụ azịza ya. A ga-enwe nguzozi nke izi ezi. UK ga-ama ikpe "ndọrọ ndọrọ ọchịchị ogwu" na ịkpa oke na-ezighi ezi ma ọ bụrụ na ọ ga-amachibido njem gaa mba dịka Jamaica n'ọnwa na-abịa n'ihi na ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi na mba dị ka Jamaica dị obere.
Kama, Maazị Bartlett gbara UK ume ka ọ sọpụrụ njikọ njikọ ya na mba Commonwealth site na ịkesa ọgwụ mgbochi ya na Jamaica na mba ndị ọzọ dara ogbenye.
Eziokwu bụ na mba 10 agbanyela ihe karịrị pasent 70 nke ọgwụ mgbochi niile n'ụwa ma na-agbatị ndị ha ọnụọgụ ugboro 5 na ọnụego ndị ọzọ nke ụwa.
Eziokwu ahụ bụkwa na ọtụtụ n'ime mba ndị a na-akpọ mba dara ogbenye jisiri ike mee ka ndị ọbịa na ndị bi na ha nwee nchebe karịa mba ndị bara ọgaranya na-enwe usoro iwu siri ike maka ọnọdụ mmadụ. Ọtụtụ ndị otu obere na ndị ọkara nke World Tourism Network (WTN) na-echegbu onwe ha banyere ahaghị nhata a ma chee na ọ ga-ewute mgbake ahụ. "Anyị na-adị mma naanị ma ọ bụrụ na anyị niile nwere nchebe," Onye isi ala US Biden kwuru. Enwere ndị isi iri asaa na asaa na ndị nwetara Nobel Nrite bụ ndị gbara Onye isi ala US ume ka ọ gbaa ọsọ maka iwepụ ikike nke oge ka mba ndị dara ogbenye nwee ike mepụta ma ọ bụ nweta ọgwụ mgbochi maka ndị bi na ha. Ihe atụ kachasị njọ na-aga n'ihu ugbu a na India.
N'ime ụwa-nke mbụ, WTTC haziri ihe omume ya na nke mbụ ya kemgbe ntiwapụ nke ọrịa ahụ - yana iri puku kwuru puku ndị ọzọ sonyere - ma na-agbaso usoro iwu ahụike na ịdị ọcha nke klaasị ụwa. eTurboNews nyere netwọk ya zuru ụwa ọnụ na WTTC maka ekele. A kpọkwara ndị otu WTN ka ha kirie ndụ ma soro ndị WTN na Cancun kwukọrịta site na WhatsApp.
Emere ka ndị nnọchi anya niile na-abịa maka oge Summit ahụ nwalee oge niile iji hụ na nchekwa ha dị oke mkpa.
N'ime ule 1,000, 2 ma ọ bụ 3 laghachiri dị mma. "Anyị ekweghị ka ndị na-anwale nke ọma ịbanye ebe a na-eme ihe omume," ka Gloria Guevara, WTTC President & CEO kwuru.
Gloria kwuru, sị: “WTTC chịkọtara ndị isi pụrụ iche sitere na ndị ọrụ nzuzo na ndị ọrụ ọha na eze na njem na njem nleta niile na nzukọ Global Summit, dị n’otu n’ọchịchọ ha nwere ịtụte njem njem mba ụwa n’enweghị nsogbu.
“Ọnụnọ anyị ebe a, na-egosi na anyị nwere ike ịmalite njem mba ọzọ ọzọ site na ị na-edebe usoro iwu ahụike na nchekwa ọhụụ, nke WTTC enyerela aka maka azụmaahịa buru ibu na obere na mpaghara ahụ.
"Anyị egosiputala na anyị jikọtara ọnụ, ma ndị ọrụ onwe na ndị ọrụ ọha na njem na njem nleta nwere ike ịmegharị mgbanwe ma mee ka ụwa na-agagharị ọzọ ka anyị wee nwee ike ịmalite njem, ịgagharị, na ịkọkọrịta ahụmịhe anyị ihu na ihu.
"Anyị mechara nzukọ anyị na mba ụwa na Cancun nwere obi ike na anyị nwere ike ịtụte ngalaba nke ga-ewepụta mgbake akụ na ụba ụwa ma kpọghachi ndị mmadụ ọnụ maka uru dị ịtụnanya mba njem na njem njem nwere ike iweta."
N'okpuru isiokwu nke "Uniting the World for Recovery," ndị ozi njem nleta na gburugburu ụwa na ndị isi azụmaahịa Travel & Tourism kwetara na ọ dị mkpa maka mmekọrịta ọha na eze na nke onwe.
Na nnọkọ mkparịta ụka Global Leaders WTTC, ha kwurịtara etu ngalaba a ga-esi gboo mkpa dị iche iche nke ichedo ọrụ, ịchekwa azụmaahịa, na ịkwado akụ na ụba ụwa site na nwughari nke njem mba ụwa.
Achọpụtara mkpa dị mkpa nke iji teknụzụ dijitalụ, dị ka biometrics, ike bụ isi na post-COVID-19 ụwa, dị ka ihe dị oke mkpa iji mepụta njem njem na-enweghị kọntaktị, nchekwa, na enweghị ntụpọ.
WTTC kpebisiri ike ịrụ ọrụ maka ọdịnihu ga-esonye ma na-adigide. O kwere nkwa na ịkwado ma kwalite nha anya nwoke na nwanyị nha anya, yana ịkwalite nnọchite anya ụmụ nwanyị na ọrụ ndị isi site na ịmalite Women'smụ nwanyị Initiative site n'enyemaka nke 18 Grand Slam otu onye mmeri, Martina Navratilova.
Nzukọ Global Summit mere mbinye aka nke WTTC Women Initiative Nkwupụta, nke gosipụtara ntinye nke ụmụ nwanyị gburugburu ụwa na mkpa ọ dị ịwe ụmụ nwanyị ka ha nwee ọganiihu dịka ndị isi, ndị ọchụnta ego na ndị ọhụụ.
Peeji na-esonụ, ị nwere ike ịlele ụbọchị abụọ nke ihe omume na-eji eTurboNews ndụ mgbasa ozi. Pịa na peeji na-esote.